Xildhibaanada Golaha shacabka oo dood ka yeeshay hindise sharciyeedka xuquuqda naafada • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xildhibaanada Golaha shacabka oo dood ka yeeshay hindise sharciyeedka xuquuqda naafada
Xildhibaanada Golaha shacabka oo dood ka yeeshay hindise sharciyeedka xuquuqda naafada
Xildhibaanada Golaha shacabka Barlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa kalfadhigooda 4-aad ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya
Kulanka oo uu shir gudoominayay guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa ugu horeyn warbixin looga dhagaystay xuquuqul insaanka ee golaha shacabka kuwaas oo soo bandhigay warbixinta akhrinta labaad hindise- sharciyeedka hay’adda Naafada Qaranka Soomaaliya.
Guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka Xildhibaan Xaawa Yuusuf Axmed ayaa golaha usoo bandhigtay qodobada ay ku kordhiyeen hindise-sharciyeedkan iyo meelaha ay wax ka badaleen.
Xildhibaanada ayay ka codsatay in xeerkan si deg deg ah lagu meel mariyo maadaama uu muhiim yahay, sidoo kalena xildhibaanada soo bandhigaan talooyinkooda.
Aqrinta ka dib ayaa xildhibaanada golaha shacabka waxa ay soo bandhigeen talooyinkooda ku saabsan xeerkan iyo meelaha wax ka badalka u baahan.
xildhibaanada ayaa dood ka yeeshay qodobada qaar ee ku jira hindise sharciyeedkan ee u baahan in aad loogu fiirsado.
Guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa sheegay in hay’addaan ay tahay mid muhiim ah loona baahan yahay in talooyin badan xildhibaanada ku daraan dhismaheeda.
” waxaa soo jeedinaya in guddiga aan kala shaqeyno sidii hindise-sharciyeedkan muhiimka ah loo dardar gelin lahaa, hay’addaan horay wey u jiri jirtay hanti Qaran iyo xuquuq ayay lahayd sidaasi darteed wa in talooyinkeena aan ku biirinaa oo fikir badan aan isweydaarsanaa si hay’adda u noqoto mid gudaha iyo dibadda ka shaqeyn karto”. ayuu yiri guddoomiye Mursal.
Xildhibaanada golaha shacabka barlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ku guda jira kalfadhigooda 4-aad waxaana maalmihii lasoo dhaafay ay dood ka lahaayeen hindise-sharciyoodyo ay horey u soo gudbisay Xukuumada halka kuwo kalena ay ansixiyeen.